[ ] Na-arụ ụka megide mmetụta uche Contagion nnwale, Kleinsman and Buckley (2015) dere, sị:
"Ọ bụrụgodị na ọ bụ eziokwu na ihe ize ndụ n'ihi na Facebook nnwale ndị ala na ọbụna ma ọ bụrụ na, na ịsị, na-arụpụta na-ekpe ikpe ịbụ ndị bara uru, e nwere iwu dị mkpa na eto ebe a na-aghaghị ịnọgide na-agbaso. N'otu ụzọ ahụ na-ezu ohi na-ezu ohi n'agbanyeghị ihe ichekwa na-aka, nke mere na anyị niile nwere ihe ziri ezi agaghị na-anwalewo on enweghị ihe ọmụma anyị na nkwenye, ihe ọ bụla ọdịdị nke nnyocha. "
Nke nke abụọ usoro ziri ezi frameworks ulere n'isiokwu a-consequentialism ma ọ bụ deontology-na-arụmụka a n'ụzọ kasị doo anya metụtara?
Ugbu a, were ya na ị chọrọ na-arụ ụka megide nke a ọnọdụ. Olee ihe ị ga-arụ ụka na ikpe na-a na-ede akụkọ maka The New York Times?
Olee, ọ bụrụ na mgbe nile, ga-unu sere okwu dị iche iche ma ọ bụrụ na ị nọ na-atụle nke a na a onye otu?
[ ] Maddock, Mason, and Starbird (2015) weere ajụjụ bụ ma na-eme nnyocha kwesịrị iji tweet na anọwo na-ehichapụ. -Agụ ha akwụkwọ na-amụ banyere ndabere.
Nyochaa mkpebi a si deontological anya.
Tụlee kpọmkwem otu mkpebi si a consequentialist anya.
Nke ị na-ahụ dokwuo anya na nke a?
[ ] Na n'otu isiokwu na-n'ụkpụrụ omume nke ubi nwere, Humphreys (2015) , chọrọ ndị na-esonụ hypothetical nnwale ka a mata usoro ziri ezi ịma aka nke adọ a na-eme na-enweghị nkwenye nke ihe nile impacted na ndị ọzọ na na harms ụfọdụ na-enyere ndị ọzọ.
"Kwuo, sị a na-eme nchọpụta na-kpọtụụrụ a set nke obodo na òtù na-achọ chepụta ma ịtụkwasị n'okporo ámá ọkụ ná mkpakara ụlọ ga-ebelata mpụ ime ihe ike. Na nke a nnyocha ahụ na-achị bụ omempụ:-achọ ụbụrụ bụ nke ndị omempụ na o nwere ike imebi nyocha na ọ ga-abụ na-abụ forthcoming n'ụzọ ọbụla (imebi ùgwù n'ihi ndị na-); ndị omempụ ga-abụ na-ebu akwụ ụgwọ nke nnyocha na-enweghị erite uru (mebiri ikpe ziri ezi); na a ga-enwe nghọtahie echiche banyere uru nke nnyocha - ma ọ bụrụ na ọ bụ irè, ndị omempụ akpan akpan agaghị akpọrọ ya (amị a isi ike maka adabere na ya kpebie obiọma). . . . The pụrụ iche mbipụta ebe a na-adịghị dị gburugburu achị Otú ọ dị. Ebe a e nwekwara ihe ize ndụ na-enweta na-abụghị ndị na-achị, ọ bụrụ na ihe atụ ndị omekome emegwara megide òtù etinye oriọna ebe. The nzukọ nwere ike ịbụ nnọọ maara nke a ize ndụ ma dị njikere agbara ha n'ihi na ha erroneously okwukwe n'ihe ọrịa-tọrọ ntọala na-atụ anya nke na-eme nnyocha si bara ọgaranya mahadum bụ ndị onwe ha so kpalie ebipụta. "
Dee ozi na ndị obodo na nzukọ àjà gị usoro ziri ezi ntule nke nnwale dị ka e mere? Ị ga-enyere ha aka ime nnwale ka chọrọ? Olee ihe ndị nwere ike imetụta mkpebi gị?
È nwere ụfọdụ mgbanwe ndị pụrụ mma gị na ntule nke ụkpụrụ ọma ndị a ibuo imewe.
[ ] Na 1970 60 ikom abuana ke ubi nnwale ahụ mere na nwoke ụlọ ịwụ na a mahadum n'etiti ebe ọdịda anyanwụ nke US (na-eme nnyocha adịghị akpọ aha mahadum) (Middlemist, Knowles, and Matter 1976) . The na-eme nnyocha chọrọ ịma ihe ndị mmadụ meghachi omume na imebi nke ha onwe onye ohere, nke Sommer (1969) a kọwara dị ka ndị "na mpaghara na-adịghị ahụ anya ókè gbara ya gburugburu ahụ mmadụ na-ahu ebe intruders ghara ịbịa." More kpọmkwem, na-eme nnyocha họọrọ ịmụ ihe otú a nwoke urination e impacted site na n'ihu ndị ọzọ dị nso. Mgbe eduzi a kpere chọpụtara ọmụmụ, ndị na-eme nnyocha mụụrụ a ubi nnwale. Sonyere na-amanye iji ekpe kasị urinal na a atọ urinal ụlọ ịwụ (na-eme nnyocha adịghị akọwa kpọmkwem otú nke a mere). Next, sonyere e kenyere otu n'ime atọ etoju nke interpersonal anya. N'ihi na ụfọdụ ndị ikom a Confederate eji a urinal nri na-esote ha, n'ihi na ụfọdụ ndị ikom a Confederate eji a urinal otu ohere n'ebe ha nọ, na n'ihi na ụfọdụ ndị ikom dịghị Confederate banyere ụlọ ịwụ. The eme nnyocha tụrụ ha pụta variables-egbu oge oge na nnọgidesi-site-eguzo a research nnyemaaka n'ime ụlọ mposi uloanumaanu n'akụkụ aka iso na si urinal. Nke a bụ otú ndị na-eme nnyocha kwuru na mmesho usoro:
"Onye Na do ke mposi uloanumaanu ozugbo n'akụkụ aka achị 'urinal. N'oge pilot ule nke a na usoro o doro anya na auditory cues enweghị ike ga-eji na-egosi na nnabata na cessation nke [urination]. . . . Kama nke ahụ, visual cues e ji. The nke hụrụ eji a periscopic prism imbedded na a tojupụtara nke akwụkwọ dina n'ala nke ụlọ mposi uloanumaanu. 11 nke anụ ọhịa ahụ (28-cm) ohere n'etiti n'ala na mgbidi nke ụlọ mposi uloanumaanu nyere a echiche, site na periscope, nke onye ọrụ ala toso na-ekwe omume kpọmkwem visual sightings nke iyi nke mmamịrị. The ekiri ekiri, Otú ọ dị, na-enweghị ike ịhụ a isiokwu ihu. The nke hụrụ malitere abụọ nkwụsị nche mgbe a isiokwu steepụ aka urinal, kwụsịrị otu mgbe urination malitere, na kwụsịrị ndị ọzọ mgbe urination ahụ kwụsị ịdị irè. "
The nchọpụta ahụ chọpụtara na-ebelata ahụ anya na-eduga ná ụba na-egbu oge nke mmalite na-ebelata eyịre (ọgụgụ 6.7).
Ị na-eche ndị sonyere na-emerụ ya ihe a?
Ì chere na ndị na-eme nnyocha kwesịrị nwere mụụrụ ihe a?
Gịnị mgbanwe, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ị ga-nwere ike ikwu iji melite usoro ziri ezi itule?
Ọgụgụ 6.7: Results si Middlemist, Knowles, and Matter (1976) . Men mgbe ha banyere ụlọ ịwụ e kenyere otu n'ime atọ ọnọdụ: nso n'ebe dị anya (a Confederate e debere na ozugbo n'akụkụ urinal), agafeghị oke anya (a Confederate e debere otu urinal wepụrụ), ma ọ bụ ọ Confederate eji a urinal. Onye nkiri guzo ke a ụlọ mposi uloanumaanu eji a omenala-wuru periscope idebe na oge igbu oge na nnọgidesi ike nke urination. Standard njehie gburugburu atụmatụ bụ adịghị.
[ ] Na August 2006, banyere 10 ụbọchị tupu a bụ isi ntuli aka, 20,000 ndị dị ndụ na Michigan natara a nzipu ozi nke gosiri na ha ịtụ vootu omume na ịtụ vootu omume nke ndị agbata obi ha (ọgụgụ 6.8). (Dị ka anyị tụlere isiokwu bụ, na US, obodo ọchịchị na-eme ihe ndekọ nke onye votes na onye ọ bụla ntuli aka na ozi a dị ka ọha na eze.) Nke a ọgwụgwọ na-emepụta ndị kasị ibu mmetụta mgbe hụrụ na ruo mgbe ahụ maka otu mpempe nzipu ozi: ọ mụbara turnout ọnụego site 8.1 pasent ihe (Gerber, Green, and Larimer 2008) . Itinye a na onodu, otu mpempe mailings a na-emepụta na-abawanye nke banyere otu pasent onu (Gerber, Green, and Larimer 2008) . Ọ rụpụtara ihe dị nnọọ ọtụtụ nke na a na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịkpa aha ya bụ Hal Malchow awa Donald Green $ 100,000 ọ bụghị na-ebipụta ihe n'ihi ihe ahụ nnwale (presumably nke mere na Malchow nwere ike ime ka eji ozi a onwe ya) (Issenberg 2012, p 304) . Ma, Alan Gerber, Donald Green, na Christopher Larimer mere ebipụta akwụkwọ akụkọ ahụ na 2008 na American Political Science Review.
Mgbe ị na-akpachara anya nyochaa mailer na ọgụgụ 6.8 ị pụrụ ịchọpụta na ndị nchọpụta ahụ aha adịghị apụta na ya. Kama nke ahụ, nloghachi adreesị bụ Baa Uru Political Consulting. Na nkweta ka akwụkwọ akụkọ ahụ na-ede akwụkwọ na-akọwa: "Special ekele na-aga Mark Grebner nke Bara Political Consulting, bụ ndị e mere na nzuzo ahụ dị na mail omume na-amụ n'ebe a."
Biko amata nke a ọgwụgwọ na okwu nke anọ usoro ziri ezi ụkpụrụ a kọwara n'isiokwu a.
Gịnị mgbanwe, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ị ga-ike ikwu na ihe a?
Dee ihe usoro ziri ezi odide ntụkwasị ahụ nwere ike ịpụta na a akwụkwọ mgbe ọ na e bipụtara.
Ọgụgụ 6.8: Agbata Obi mailer si Gerber, Green, and Larimer (2008) . Nke a mailer ụba turnout mmikpo 8.1 pasent ihe, ndị kasị ibu mmetụta na ama mgbe a hụrụ maka otu-mpempe mailer.
[ ] Iwuli na aga ajụjụ, ozugbo ndị a 20,000 mailers e zigara (ọgụgụ 6.8), nakwa dị ka 60,000 ndị ọzọ nwere obere mmetụta ọsọ ọsọ mailers, e nwere otu backlash si sonyere. N'ezie, Issenberg (2012) (p 198) na-akọ na "Grebner [onye nduzi nke Bara Political Consulting] dịghị mgbe ike gbakọọ otú ọtụtụ ndị ha na nsogbu na-eme mkpesa site na ekwentị, n'ihi ọkwá ya za igwe jupụtara mere ngwa ngwa na ọhụrụ listi ọkpọ oku na-enweghị ike ịhapụ ozi. "N'eziokwu, Grebner kwuru na backlash gaara ọbụna ibu ọ bụrụ na ha scaled elu ọgwụgwọ. Ọ si Alan Gerber, otu n'ime ndị na-eme nnyocha, "Alan ọ bụrụ na anyị nọrọ na narị ise puku dollar na kpuchie dum ala gị na m ga-ebi na Salman Rushdie." (Issenberg 2012, p 200)
Ndi emi ọmụma ịgbanwe gị azịza ndị gara aga ajụjụ?
Gịnị azum n'ihi emeso na-eme mkpebi na ihu nke ejighị ihe n'aka ị ga ike ikwu maka ọdịnihu ọmụmụ ndị yiri?
[ ] Na omume, ọtụtụ usoro ziri ezi arụmụka emee banyere ọmụmụ ebe na-eme nnyocha na-enweghị ezi asian nkwenye n'aka sonyere (eg, atọ ikpe ọmụmụ ke ibuot emi). Otú ọ dị, usoro ziri ezi arụmụka nwekwara ike ime ka ọmụmụ na-enwe ezi ụbụrụ bụ. Chepụta a hypothetical ọmụmụ ebe ị ga-ezi ụbụrụ bụ site sonyere, ma nke ị ka na-eche ga-unethical. (Ndumodu: Ọ bụrụ na ị na-adọga, i nwere ike ịgbalị na-agụ Emanuel, Wendler, and Grady (2000) .)
[ ] Researchers mgbe ọgụ na mgba na-akọwa ha usoro ziri ezi echiche onye ọ bụla ọzọ na ọha na eze. Mgbe a chọpụtara na Ire, Ties, na Time nd o-mata, Jason Kauffman, onye ndú nke ìgwè ndị nnyocha, mere ka a ole na ole n'ihu ọha e kwuru banyere ihe ndị gbasara ime mmụọ nke oru ngo. -Agụ Zimmer (2010) na mgbe ahụ ideghari Kauffman kwuru n'iji ụkpụrụ na usoro ziri ezi frameworks na-akọwara ibuot emi.
[ ] Banksy bụ otu n'ime ihe ndị kasị ama dịkọrọ ndụ artist na United Kingdom, na ọ bụ ya bụ ịma maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agba mbọ n'okporo ámá graffiti (ọgụgụ 6.9). Ya kpọmkwem njirimara, Otú ọ dị, bụ ihe omimi. Banksy nwere website ya mere, ọ pụrụ ime ka onye ọ bụ n'ihu ọha ma ọ bụrụ na ọ chọrọ, ma ọ họọrọ ghara. Na 2008 na Daily Mail, a akwụkwọ akụkọ, bipụtara otu isiokwu na-ekwu na ka a mata Banksy si ezigbo aha ya. Mgbe ahụ na 2016, Michelle Hauge, Mark Stevenson, D. Kim Rossmo na Steven C. Le Comber (2016) nwara iji nyochaa a na-azọrọ na iji Dirichlet usoro ngwakọta nlereanya nke ala àgwà. More kpọmkwem, ha chịkọtara ndị ala ebe ndị Banksy ihu ọha graffiti na Bristol na London. Ọzọ, site n'inyocha site ochie akwụkwọ akụkọ isiokwu na ọha ịtụ vootu ndia, Hauge na ndị ọrụ ibe hụrụ gara aga adreesị nke aha ya bụ mmadu, nwunye ya, na ya football (ie, bọl) otu. Ede akwụkwọ si nachikota Inweta nke ha akwụkwọ dị ka ndị a:
"Na ọ dịghị ọzọ dị oké njọ 'enyo enyo' [sic] ichoputa, ọ bụ ike-eme ka kwuo ihe e kwuru banyere Banksy si amata dabeere na analysis n'ihu ebe a, ndị ọzọ karịa si na ọnụ ọnụ nke geoprofiles na ma Bristol na London na-agụnye adreesị mara ka ndị ha na [aha redacted]. "
-Esonụ Metcalf and Crawford (2016) , m kpebiri ghara agụnye aha nke onye mgbe anyị na omumu.
Amata omumu a n'iji ụkpụrụ na usoro ziri ezi frameworks ke ibuot emi.
Ndị dere akwụkwọ ziri ezi omumu a nkịtị nke akwụkwọ na ndị na-esonụ ikpe: "More agụnye, ndị a na-arụpụta na-akwado gara aga aro na analysis nke obere iyi ọha egwu metụtara omume (eg, graffiti) nwere ike ike iji nyere aka ịchọta-eyi ọha egwu bases n'ihu ndị siri ezigbo mere ime, na-enye a na-adọrọ mmasị atụ nke ngwa nke nlereanya ka a mgbagwoju, n'ezie na-ụwa nsogbu. "nke a ọ ịgbanwe gị uche nke akwụkwọ akụkọ ahụ? Ọ bụrụ otú ahụ, olee?
Ndị dere akwụkwọ gụnyere ndị na-esonụ usoro ziri ezi dee na njedebe nke ha akwụkwọ: "Ihe ndị maara nke, na nkwanye ùgwù nke, nzuzo nke [aha redacted] na ndị ikwu ya na ndị esiwo otú a na-eji data n'ihu ọha na ngalaba. Anyị amarawo ụma wepụ kpọmkwem adreesị. "Nke a ọ ịgbanwe gị uche nke akwụkwọ akụkọ ahụ? Ọ bụrụ otú ahụ, olee? Ị na-eche na ọha na eze / onwe dichotomy-eme ka uche na nke a?
Ọgụgụ 6.9: Street art site Banksy na Cheltenham, England. Photo site Brian Robert Marshall. Isi Iyi: Wikimedia Commons .
[ ] Na ihe na-akpali isiokwu Metcalf (2016) na-eme ka esemokwu ahụ "n'ihu ọha dị datasets nwere onwe data nwere n'etiti ndị kasị akpali na-eme nnyocha na ndị kasị ize ndụ na-achị."
Olee abụọ ihe atụ na-akwado nke a na-ekwu?
Dị ka ihe ahụ n'isiokwu Metcalf na-azọrọ na bụ anachronistic iche na "ihe ọ bụla ọmụma nsogbu esesịn e mere site a ọha dataset". Nye otu ihe atụ nke ebe a nwere ike ịbụ ikpe.
[ ] N'Isi nke Iri a, m chọrọ ọchịchị nke isi mkpịsị aka na niile data bụ ike nwere ike amata na niile data bụ nwere mmetụta ọsọ ọsọ. Isiokwu 6.5 na-enye ndepụta nke ihe atụ nke data nke na-enweghị doro anya na ya onwe-akọwapụta ọmụma ma nke ka nwere ike a jikọrọ kpọmkwem ndị mmadụ.
Buru abụọ nke ihe atụ ndị a na-akọwa otú ndị de-anonymization agha ma ikpe nwere a yiri Ọdịdị.
N'ihi na onye ọ bụla nke ihe atụ abụọ na akụkụ (a),-akọwa otú ndị data ga-ekpughere ha mwute ozi gbasara ndị mmadụ na dataset.
Ugbu a, tụtụlite a atọ dataset si na tebụl. Dee ozi na onye na-ewere atọhapụ ya. -Akọwara ha otú a data nwere ike ịbụ nwere amata nke nwere mwute.
Isiokwu 6.5: List of ihe atụ nke na-elekọta mmadụ data na-enweghị ihe ọ bụla doro anya onwe-akọwapụta ọmụma, ma nke ka nwere ike a jikọrọ kpọmkwem ndị mmadụ.
Ahụ ike mkpuchi ndekọ Sweeney (2002)
Kaadị azụmahịa data Montjoye et al. (2015)
Netflix nkiri fim bụ maka data Narayanan and Shmatikov (2008)
Ekwentị oku na meta-data Mayer, Mutchler, and Mitchell (2016)
Omume igwe mmadụ, ndutịm, na-elekọta mmadụ data banyere ụmụ akwụkwọ Zimmer (2010)
[ ] Ibute onwe gị na onye ọ bụla akpụkpọ ụkwụ na-agụnye gị sonyere na izugbe ọha, ọ bụghị naanị ndị ọgbọ gị. Nke a puru iche bu gosiri n'ihe banyere ndị Juu Ala ala Disease Hospital (Katz, Capron, and Glass 1972, Ch. 1; Lerner 2004; Arras 2008) .
Dr. Chester M. Southam bụ a na-akwanyere ùgwù dọkịta na-eme nchọpụta na Sloan-Kettering Institute Ọrịa cancer Research na ihe osote prọfesọ nke Medicine na Cornell University Medical College. On July 16, 1963, Southam na abụọ ndị ọrụ ibe agbara ndụ cancer mkpụrụ ndụ n'ime ozu 22 gwụ ndị ọrịa na ndị Juu adịghị Ala Disease Hospital na New York. Ndị a injections bụ akụkụ nke Southam si research ịghọta na dịghịzi usoro nke kansa ọrịa. Na mbụ nnyocha, Southam hụrụ na ahụ ike ndị ọrụ afọ ofufo na-ajụ agbara cancer mkpụrụ ndụ na Olee ihe enyemaka 4 ka izu 6, ebe ọ were ọrịa ndị na-ama ama cancer ogologo oge. Southam-eche ma na-egbu oge omume na cancer ọrịa bụ n'ihi na ha nwere cancer ma ọ bụ n'ihi na ha bụ ndị agadi na debilitated ama. Ilebara ndị a ohere, Southam kpebiri igba ndụ ndụ nke kansa n'ime otu ìgwè ndị na-agadi na ndị gwụ ma na-enweghị cancer. Mgbe okwu nke ọmụmụ mgbasa, triggered na akụkụ ndị arụkwaghịm nke atọ dibịa bụ onye a gwara na-ekere òkè, ụfọdụ mere atụnyere ndị Nazi n'ogige ịta ahụhụ ahụ nwere, ma ndị ọzọ dabeere na akụkụ on Mmesi obi ike dịgasị site Southam-hụrụ research unproblematic. N'ikpeazụ, New York State Board of Regents enyocha ikpe iji kpebie ma ọ bụrụ na Southam ga-enwe ike ịnọgide na-eme na nkà mmụta ọgwụ. Southam rụrụ ụka na-azara ọnụ ya na ọ na-eme ihe "kasị mma ọdịnala eme adakarị omume." Southam si echebe onwe ha ahụ dabeere a ọnụ ọgụgụ nke na-ekwu, nke e niile na-akwado ọtụtụ na-akwanyere ùgwù ndị ọkachamara na-gbara àmà n'ihu ya: (1) ya research bụ nke elu na nkà mmụta sayensị na-elekọta mmadụ n'uru; (2) a na-enweghị appreciable ize ndụ ka sonyere; a na-ekwu dabeere na akụkụ nke Southam si 10 afọ nke tupu ahụmahụ na ihe karịrị 600 na-achị; (3) na ọkwa nke ngosi a ga-gbanwee dị ka larịị nke ize ndụ jụrụ site na-eme nchọpụta; (4) nnyocha bụ ime na otú e si agwọ omume n'oge ahụ. N'ikpeazụ, onye na Regent si osisi hụrụ Southam ikpe mara nke wayo, aghụghọ, na unprofessional omume, na kwụsịtụrụ ya ike na ikike nke ahụ otu afọ. Ma, afọ ole na ole mgbe e mesịrị, Chester M. Southam a họpụtara president nke American Association of Cancer Researchers.
Amata Southam si ọmụmụ ihe ahụ anọ ụkpụrụ ke ibuot emi.
Ọ na-egosi na Southam were n'ọnọdụ nke ndị ọrụ ibe ya na n'ụzọ ziri ezi-atụ anya otú ha nwere ike ikwu na ọlu-ya; N'eziokwu, ọtụtụ n'ime ha gbara àmà ya n'aha. Ma, o nweghị ike ma ọ bụ na-adịghị njikere ịghọta otú ya research pụrụ ịbụ nsogbu ọha na eze. Olee ọrụ i chere echiche ọha na eze-nke nwere ike ịbụ iche si echiche nke ndị keere òkè-kwesịrị inwe ke nnyocha ụkpụrụ ọma? Gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na echiche ọtụtụ na ndị ọgbọ echiche dị iche?
[ ] Na a akwụkwọ titled "Crowdseeding na Eastern Congo:-eji ekwe ntị anakọta aghara Ihe Data na Real Time", Van der Windt na Humphreys (2016) na-akọwa a na-ekesa data collection usoro (gụọ isi nke 5) na ha kere Eastern Congo. Akọwa otú ndị na-eme nnyocha si mesoo anya banyere ekwe omume Harms ka sonyere.
[ ] Na October 2014, atọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọkà mmụta sayensị zitere mailers na 102,780 ụghalaahia Ntuli Aka na Montana dị ka akụkụ nke nnwale tụọ ma Ntuli bụ ndị e nyere ozi ndị ọzọ na-yikarịrị ka votu. The mailers-nke e dere 2014 Montana General Election Voter Ozi Guide-enịm Montana Ụlọikpe Kasị Elu Justice aga ime, nke bụ a na-abụghị partisan ntuli aka, on a ọnụ ọgụgụ site na-emesapụ aka mgbanwe, bụ nke gụnyere Barack Obama na Mitt Romney ka edebere. The mailer na-gụnyere a mmeputakwa nke Great Seal nke State of Montana (ọgụgụ 6.10).
The mailers eme mkpesa Montana Ntuli, ha mere ka Linda McCulloch, Montana si Secretary nke State, na faịlụ a iwu mkpesa na Montana gọọmenti ala. The mahadum na-arụrụ ọrụ na-eme nnyocha-Dartmouth na Stanford-zitere a akwụkwọ ozi na onye na-natara mailer ịrịọ mgbaghara maka ihe ọ bụla nwere mgbagwoju anya na-eme ka o doo anya na ndị mailer "e adịghị mmekọ na ihe ọ bụla na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ, nwa akwukwo ma ọ bụ nzukọ, na anaghị ebu n'obi mmetụta ọ bụla agbụrụ. "The akwụkwọ ozi nakwa ghọta na ranking" tụkwasịrị ọha ọmụma banyere onye nyere ka onye ọ bụla nke mkpọsa. "(ọgụgụ 6.11)
Na May 2015, ndị Commissioner nke Political Omume nke State of Montana, Jonathan Motl, kpebiri na ọ bụ na-eme nnyocha imebi Montana iwu, sị: "Commissioner na-ekpebi na e nwere zuru ezu ihe na-egosi na Stanford, Dartmouth na / ma ọ bụ ndị na-eme nnyocha imebi Montana mkpọsa omume iwu ndị kwuru ka registration, akuko na ngosi nke onwe ha expenditures. "(zuru ezu Inweta Number 3 na Motl (2015) ). The Commissioner nwekwara tụrụ aro na County Attorney chọpụta ma hà na ojiji nke n'enweghị ikike ojiji nke Great Seal nke Montana na-emegide iwu Montana ala iwu (Motl 2015) .
Stanford na Dartmouth ekwenyeghị Motl si na-achị. A Stanford spokeswoman aha ya bụ Lisa Lapin kwuru "Stanford ... ekweghị ọ bụla ntuli aka iwu e merụrụ emerụ," nakwa na nzipu ozi "-ebughị ihe ọ bụla onwe-akwado ma ọ bụ na-emegide ihe ọ bụla nwa akwukwo." O kwuru na mailer kwuru hoo haa na ọ "bụ nonpartisan na adịghị akwalite nwa akwukwo ma ọ bụ ọzọ ahụ. " (Richman 2015)
-Amata nke a ọmụmụ ihe ahụ anọ ụkpụrụ na abụọ frameworks kọwara n'isiokwu a.
Iche na mailers e zigara a random sample nke Ntuli (ma ndị ọzọ na na na a oge), n'ọnọdụ ndị dị aṅaa ka nke a pụrụ nzipu ozi nwere gbanwere pụta nke Ụlọikpe Kasị Elu Justice nhoputa ndi ochichi?
N'ezie, mailers na-adịghị zigara a random sample nke Ntuli. Dị ka otu akụkọ site Jeremy Johnson (a na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọkà mmụta sayensị na-nyere aka na nchoputa), mailers "e zigara 64.265 Ntuli mara dị ka abụ na-emesapụ aka centrist leaning na Democratic leaning gburugburu ya na 39.515 Ntuli mara dị ka mgbanwe na-centrist na Republican leaning gburugburu ya. The eme nnyocha n'onye ezi omume na kara n'etiti Democratic na Republican nọmba on mgbakwasị na ha na-atụ anya turnout na-budata ala n'etiti Democratic Ntuli. "Nke a ọ ịgbanwe gị ntule nke research imewe? Ọ bụrụ otú ahụ, olee?
Omume nchoputa, nke na-eme nnyocha kwuru na ha ẹmende a na ntuli aka na akụkụ n'ihi na "ọ bụghị ikpe agbụrụ e chiri anya contested ke akpan. Nke dabeere analysis nke 2014 bụ isi ntuli aka pụta na onodu nke gara aga Montana ikpe ntuli aka, na-eme nnyocha kpebiri na ọ bụ nnyocha ọmụmụ dị ka e mere na-agaghị ịgbanwe ihe ma zoo. " (Motl 2015) Ndi emi ịgbanwe gị ntule nke research ? Ọ bụrụ otú ahụ, olee?
N'ezie, nhoputa mesịrị bụrụ bụghị karịsịa nso (Isiokwu 6.6). Ka nke a na-agbanwe gị ntule nke research? Ọ bụrụ otú ahụ, olee?
Ọ na-enyo na a na-amụ na rubere Dartmouth IRB site na otu nke na-eme nnyocha, ma udi iche n'ụzọ sitere ahụ n'ezie Montana ọmụmụ. The mailer eji na Montana na ọ dịghị mgbe osụk aka IRB. The ọmụmụ dịghị mgbe osụk aka Stanford IRB. Ka nke a na-agbanwe gị ntule nke research? Ọ bụrụ otú ahụ, olee?
Ọ na-enyo na-eme nnyocha zitere yiri nrọputa ihe ka 143.000 Ntuli Aka na California na 66.000 ke New Hampshire. Dị ka m mara, e nweghị iwu mkpesa triggered site ndị a ihe dị ka 200,000 ndị ọzọ mailers. Ka nke a na-agbanwe gị ntule nke research? Ọ bụrụ otú ahụ, olee?
Ihe, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ga-unu gaara eme ma ọ bụrụ na ị bụ onye bụ isi nchọpụta? Olee ihe ị ga e mere na-amụ ihe ma ọ bụrụ na i nwere mmasị ịgagharị ma na ozi ndị ọzọ enwekwu Voter turnout na nonpartisan agbụrụ?
Isiokwu 6,6: Results si 2014 Montana Ụlọikpe Kasị Elu Justice ntuli aka. Isi Iyi: Webpage nke Montana Secretary of State .
Ụlọikpe Kasị Elu Justice # 1
Ụlọikpe Kasị Elu Justice # 2
Chepụta 6,10: Mailer zitere atọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọkà mmụta sayensị na-102.780 ụghalaahia Ntuli Aka na Montana dị ka akụkụ nke nnwale tụọ ma Ntuli bụ ndị e nyere ozi ndị ọzọ na-yikarịrị ka votu. The sample size na nnwale a bụ Olee ihe enyemaka 15% nke oruru Ntuli Aka na steeti.
Chepụta 6,11: Apology akwụkwọ ozi e zigara ka 102.780 ụghalaahia Ntuli Aka na Montana natara mailer na ọgụgụ 6,10. The akwụkwọ ozi zitere oche nke Dartmouth na Stanford, na mahadum na-arụrụ ọrụ na-eme nnyocha bụ onye zitere ndị mailer.
[ ] On May 8, 2016, ndị nnyocha abụọ-Emil Kirkegaard na Julius Bjerrekaer-kpụchasịrị ọmụma si online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị OkCupid na n'ihu ọha tọhapụrụ a dataset nke banyere 70,000 ọrụ, gụnyere variables nke aha njirimara, afọ, okike, na ọnọdụ, okpukpe-metụtara echiche, ịgụ kpakpando metụtara echiche, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị metụtara, ọnụ ọgụgụ nke foto, wdg, yana azịza nye n'elu 2600 ajụjụ na saịtị. Na a draft akwụkwọ soro tọhapụrụ data, ndị dere kwuru na "Ụfọdụ nwere ike ikwu na ụkpụrụ ọma ndị na-ekpokọta na-atọhapụ a data. Otú ọ dị, niile data dị na dataset bụ ma ọ bụ ndị nọrịị n'ihu ọha dị, otú atọhapụ a dataset nanị chụrụ ya n'àjà na a ọzọ bara uru ụdị. "
Mgbe a data ntọhapụ, otu n'ime ndị dere, a gwara on Twitter: "Nke a data set na ukwuu re-amata. Ọbụna na-agụnye usernames? Bụ ọrụ ọ bụla na niile mere anonymize ya? ". Ọ zara m "Ee e Data bụ ugbua ọha. " (Zimmer 2016; Resnick 2016)
-Amata nke a data ntọhapụ n'iji ụkpụrụ na usoro ziri ezi frameworks ulere n'isiokwu a.
Ị ga-eji nke a data maka gị onwe gị nnyocha?
Gịnị ma ọ bụrụ na ị na a kpụchasịrị ya onwe gị?
[ ] Na 2010 ọgụgụ isi nyocha na US Army nyere 250,000 nkewa diplomatic Gịnị nzukọ WikiLeaks, ha na-ekemende gwa online. Gill and Spirling (2015) na-ekwu na "ndị WikiLeaks ngosi nwere na-anọchi anya a trove nke data nke enwere ike tapped ka nwalee aghụghọ chepụtara mba na mba na ibe ya ", na mgbe ahụ statistically mara na sample nke leaked akwụkwọ. Dị ka ihe atụ, ndị dere atụmatụ na ha na-anọchite banyere 5% niile diplomatic cables n'oge ahụ oge, ma na nke a hà dị n'ụdị ọrụ nnọchite anya obodo ka ọrụ nnọchite anya obodo (lee ọgụgụ 1 of ha akwụkwọ).
-Agụ akwụkwọ akụkọ ahụ, na mgbe ahụ dee otu usoro ziri ezi odide ntụkwasị ya.
Ndị dere akwụkwọ adịghị nyochaa ọdịnaya nke ọ bụla n'ime ndị leaked akwụkwọ. Nke ọ bụla oru ngo na iji ndị a cables na ị ga-eduzi? Nke ọ bụla oru ngo na iji ndị a cables na ị ga-eduzi?
[ ] Iji na-amụ otú ụlọ ọrụ ndị ikwu na mkpesa, a na-eme nchọpụta zitere adịgboroja mkpesa akwụkwọ ozi ka 240 elu-ọgwụgwụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na New York City. Nke a bụ otu ihe kwuru si nru ugha akwụkwọ ozi.
"Ana m ede ihe a na akwụkwọ ozi ka gị n'ihi na m iwe banyere na-adịbeghị anya ahụmahụ m nwere na gị ụlọ oriri na ọṅụṅụ. N'oge na-adịbeghị, mụ na nwunye m na-eme ememe anyị akpa ncheta. ... The mgbede wee soured mgbe mgbaàmà wee pụta ìhè banyere awa anọ mgbe eri. Extended ọgbụgbọ, vomiting, afọ ọsịsa, na abdominal cramps niile kọwara otu ihe: nsị na nri. Ọ na-eme m oké iwe dị nnọọ iche na anyị pụrụ iche ihunanya mgbede wee belata ka nwunye m na-ele m magbuo onwe na a nwa ebu n'afọ na ọnọdụ na tiled n'ala nke anyị ụlọ ịwụ n'etiti agba nke na-atụba elu. ... Ọ bụ ezie na ọ na-adịghị nzube m na faịlụ ọ bụla na-akọ na Mma Business Bureau ma ọ bụ na Department of Health, m chọrọ ka ị, [aha nke restaurateur], iji ghọta ihe m na-ebe na atụmanya na ị ga-anabata ya. "
Inwale omumu a n'iji ụkpụrụ na usoro ziri ezi frameworks kọwara n'isiokwu a. Nyere nyocha gị, ị ga-eme n'ọmụmụ ihe?
Nke a bụ otú ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-natara akwụkwọ ozi si meghachi omume: "Ọ bụ culinary ọgba aghara dị ka ndị nwe, oru na chefs gwupụtawo kọmputa maka [aha redacted] abụọ ma ọ bụ kaadị ndia, enyocha menus na-emepụta deliveries maka ikekwe na emebiwo nri, na ajụjụ kichin ọrụ gbasara o kwere omume gafee, ihe niile akwalitewo ihe ma na mahadum na prọfesọ now ikweta bụ azụmahịa ụlọ akwụkwọ ọmụmụ si hell. " (Kifner 2001) ndi emi ọmụma agbanwe otú ị amata ọmụmụ?
Dị ka m maara, nke a na-amụ na-adịghị enyocha site na IRB ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ-atọ ndị ọzọ. Ọ bụ na nke mgbanwe otú ị amata ọmụmụ? Gịnị mere ma ọ bụ gịnị mere?
[ ] Iwuli on a gara aga ajụjụ, M chọrọ ka i jiri omumu a ka a kpamkpam dị iche iche ọmụmụ na-ekerekwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Na nke a ọzọ ọmụmụ, Neumark na ibe (1996) zitere abụọ nwoke na ụmụ nwanyị abụọ bụ ka ụmụ akwụkwọ mahadum na ụgha malitegharịa ime n'ihi na ọrụ dị ka waiters na waitresses na 65 ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Philadelphia, iji chọpụta ihe na mmekọahụ ịkpa ókè na ụlọ oriri na ọṅụṅụ igo. The 130 ngwa dugara 54 ajụjụ ọnụ na 39 ọrụ na-enye. Nnyocha ahụ gosiri statistically ịrịba àmà nke mmekọahụ ịkpa ókè megide ụmụ nwanyị na elu-price ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Dee ihe usoro ziri ezi odide ntụkwasị maka ọmụmụ.
Ị chere na nke ọmụmụ bụ ethically iche na nke a kọwara na aga na ajụjụ. Ọ bụrụ otú ahụ, olee?
[ ] N'oge na gburugburu 2010, 6.548 ndị prọfesọ na United States natara ozi ịntanetị yiri nke a.
Ana m ede gị n'ihi na m a gaje Ph.D. -amụrụ bukwanu mmasị gị nnyocha. My atụmatụ bụ itinye Ph.D. mmemme a na-abịa daa, m chọsiri ike ịmụta ihe dị ukwuu ka m nwere ike banyere nnyocha ohere na ọ dịgodị.
M ga-na campus taa, ọ bụ ezie na m maara na ọ na-obere mara, M na-eche ma ọ bụrụ na unu nwere ike 10 nkeji mgbe ị ga-adị njikere izute m na-eji nkenke oge na-ekwu okwu banyere ọrụ gị na ihe ọ bụla o kwere omume ohere ka m tinye aka na gị nnyocha. Ọ bụla nke ga-abụ adaba n'ihi na ị ga-abụ ezi na m, dị ka nzukọ unu bụ m mbụ kacha mkpa n'oge a campus nleta.
Daalụ n'ọdịnihu gị echiche.
Obi, Carlos Lopez "
Ndị a ozi ịntanetị bụ akụkụ nke a ubi nnwale tụọ ma professors yikarịrị ka ha na-anabata email dabere na 1) oge-eku (taa vs n'izu ọzọ) na 2) aha nke ziri ozi nke e-iche na-egosi ebe mmadụ na okike (eg, Meredith Roberts, Raj Singh, wdg). -Eme nchọpụta chọpụtara na mgbe na-arịọ ndị na-ezukọ na 1 week, Kọkeshịan ụmụ nwoke e nyere ohere ngalaba òtù banyere 25% ọzọ ọtụtụ mgbe ndị inyom na-amachaghị. Ma, mgbe nru ugha ụmụ akwụkwọ rịọrọ nzukọ n'otu ụbọchị ndị a nakawa etu e nnoo tutu amama (Milkman, Akinola, and Chugh 2012) .
Amata ihe a dị ka ụkpụrụ na frameworks ke ibuot emi.
Mgbe ọmụmụ bu onye-isi, na-eme nnyocha zigara ndị na-esonụ debriefing email na ndị niile sonyere.
"Na nso nso a, ị natara ozi site na a na-amụrụ arịọ maka 10 nkeji oge gị na-ekwurịta gị Ph.D. usoro ihe omume (n'ahụ nke email ahụ dị n'okpuru ebe). Anyị na-emailing gị taa ka debrief ị na-ahụ n'ezie nzube nke na email, dị ka ọ bụ akụkụ nke a nnyocha. Anyị nwere olileanya na omumu ihe emeghị ka ị bụla emeghasịkwa na anyị arịọ mgbaghara ma ọ bụrụ na ị na-mgbe niile inconvenienced. Olileanya anyị bụ na akwụkwọ ozi a ga-enye a zuru ezu nkọwa nke nzube na imewe nke ọmụmụ anyị iji belata ihe ọ bụla ị nwere ike nwee ihe i tinyere aka na. Anyị na-ekele gị maka oge gị na maka ịgụ ihe ọzọ ma ọ bụrụ na ị bụ mmasị ịmata ihe mere i natara ozi a. Anyị na-atụ ị ga-ahụ uru nke ihe ọmụma anyị na-atụ anya amị na a nnukwu agụmakwụkwọ ọmụmụ. "
Mgbe na-akọwa nzube na imewe nke ọmụmụ, ha kwukwara na:
"Ozugbo ahụ pụta anyị research dị, anyị ga-biputere ha ebe nrụọrụ weebụ anyị. Biko obi ike na ọ dịghị amata data ga-kọrọ site na omumu ihe nka, na ayi n'etiti isiokwu imewe ana achi achi na anyị ga na-enwe ike mata email responsiveness ihe nakawa etu esi na rụpụta mkpokọta nchịkọta - bụghị na ọ na-. Ọ dịghị onye ma ọ bụ mahadum ga-amata na ihe ọ bụla nke nnyocha ma ọ bụ data anyị na-ebipụta. N'ezie, ihe ọ bụla otu onye email omume bụ ndị bara uru dị ka e nwere otutu ihe mere otu onye ngalaba so nwere ike ikwe ma ọ bụ iju a nzukọ arịrịọ. All data esesịn a edepuchaala mata na amata email Ibọrọ ama na e ehichapụ anyị ọdụ data na yiri ihe nkesa. Ke adianade do, mgbe ndị data bụ amata, ọ na-echebe na ike na ala okwuntughe. Na dị ka mgbe niile dị ka o mere mgbe ọmụmụ ha si eme omume nnyocha metụtara ụmụ mmadụ na-achị, anyị research ogbugba ndu e mma site anyị mahadum 'ulo oru Review Boards (na Columbia University Morningside IRB na University of Pennsylvania IRB).
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ikike gị dị ka a nnyocha isiokwu, ị pụrụ ịkpọtụrụ Columbia University Morningside ulo oru Review Board na 212-851-7040 ma ọ bụ site email na askirb@columbia.edu na / ma ọ bụ University of Pennsylvania ulo oru Review Board na 215 -898-2614.
Daalụ ọzọ n'ihi na oge gị na nghọta nke ọrụ anyị na-eme. "
Gịnị bụ ihe ndị na arụmụka nke debriefing na nke a? Gịnị bụ arụmụka megide? Ì chere na ndị na-eme nnyocha kwesịrị debriefed ndị sonyere na nke a?
Na-akwado online ihe, ndị na-eme nnyocha nwere a ngalaba akpọ "Human achị nchebe." Biko gụọ nkebi a. Ò nwere ihe ị ga-gbakwunye ma ọ bụ wepu.
Gịnị bụ na-eri nke ihe a na-eme nnyocha? Gịnị bụ na-eri nke ihe a ka sonyere? Andrew Gelman (2010) rụrụ ụka na sonyere na ihe omumu a gaara ụgwọ atụrụ ha ini ke nnwale bu onye-isi. Ị kwenyere? Gbalịa mee ka gị sere okwu n'iji ụkpụrụ na usoro ziri ezi frameworks na isi.